အခြေခံအင်္ဂလိပ်အသုံး ၂၂ - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on September 29, 2014 at 9:55 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၆၉။ both with verbs နှစ်ခုစလုံး၊ နှစ်ယောက်စလုံးအား ကြိယာနှင့်တွဲသုံးသည့်အခါ
both သည်အခြားကြိယာဝိသေသနများကဲ့သို့ပင် ကြိယာနှင့်တွဲကာ ၀ါကျအလယ်တွင်ရှိနိုင်ပါသည်။
auxiliary verb + both အကူကြိယာ၏နောက်တွင်နေသည်။
am/are/is/was/were + both ကြိယာ be ၏နောက်တွင်နေသည်။
They have both finished.
သူတို့ နှစ်ဦးလုံး ပြီးသွားပြီ။
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးလုံး မောပန်းနေသည်။
both + other verb အခြားကြိယာများ၏နောက်တွင် နေသည်။
My parents both like travelling.
ကျွန်တော့် မိဘနှစ်ပါးစလုံး ခရီးသွားခြင်းကို နှစ်သက်သည်။
ခင်ဗျားတို့ နှစ်ဦးလုံး မောပန်းနေပုံရသည်။
၇၀။ both ...and နှင့် . . .လည်းပဲ
၄င်းသည် အရည်အသွေးနှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖော်ပြလိုသည့်အခါသုံးသည်။ “တစ်ခု ဖြစ်သလို အခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုလုပ်သလို အခြားတစ်ခုလည်းလုပ်သည်။” ဟုပြောလိုရင်းဖြစ်သည်။
both + clause + and + clause
Both . . . and နှစ်ခုကြားတွင် အမျိုးအစားတူစကားလုံးများသုံးလေ့ရှိသည်။
သူမသည် လှလည်းလှသည်။ တော်လည်းတော်သည်။
I spoke to both the Director and his secretary. (nouns)
ကျွန်တော် ညွှန်မှူးနှင့် သူ့အတွင်းရေးမှူး နှစ်ယောက်စလုံးအား ပြောပြခဲ့သည်။
(NOT I both spoke to the the Director and his secretary. မဟုတ်ပါ။ ကြိယာနှင့် နာမ် နှစ်ခုတွဲနေသည်။) spoke ၏ရှေ့ထားလိုပါက ကြိယာနှစ်ခုတွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ပြောလည်းပြော၊ လုပ်လည်းလုပ် တစ်ခုခုဖြစ်ရမည်။
She both plays the piano and sings. (verbs)
သူမ စန္ဒယားလည်းတီးသလို သီချင်းလည်းဆိုသည်။
(NOT She both plays the piano and she sings. မဟုတ်ပါ။ ) (verb နှင့် clause အမျိုးအစားမတူဖြစ်နေသည်။)
၇၁။ bring and take ယူလာသည်။ ယူသွားသည်။
၁။ bring အား ပြောသူထံသို့ယူလာသည် (ထိုနေရာမှ ဤနေရာသို့ရွေ့လျားမှု)အားပြသည့်အခါ သုံးသည်။
Take အား ပြောသူထံမှအခြားနေရာသို့ယူသွားသည် (ဤနေရာမှ ထိုနေရာသို့ရွေ့လျားမှု) အားပြသည့်အခါသုံးသည်။
ဒါဟာ စားသောက်ဆိုင်ကောင်းတစ်ခုပါ။ ဒီကိုခေါ်လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(NOT Thanks for taking me here. )
Let’s have another drink and then I'll take you home.
နောက်တစ်ခွက်လောက်သောက်ကြစို့ ပြီးရင် မင်းကို အိမ်လိုက်ပို့မယ်။
(NOT . . . and then I'll bring you home.)
(တယ်လီဖုန်းတွင်) Can we come and see you next weekend? We'll bringapicnic.
နောက်တစ်ပတ်လာတွေ့လို့ရမလား။ တို့ လာပျော်ပွဲစားမယ်။
Let's go and see the Robinsons next weekend. We can takeapicnic.
နောက်တစ်ပတ် ရော်ဘင်ဆန်တို့ကိုသွားတွေ့စို့။ သွားပျော်ပွဲစားမယ်လေ။
၂။ bring အား ပြောသူရှိသည့်နေရာ၊ ရှိနေမည့်နေရာကိုညွှန်းရန်သုံးသည်။
Can you bring the car to my house tomorrow?
မနက်ဖြန် ကျွန်တော့်ကားကို အိမ်ကိုယူလာနိုင်မလား။
Can you take the car to the garage tomorrow?
မနက်ဖြန်ကျရင် ကျွန်တော့်ကားကို ကားဂိုဒေါင် (ကားပြင်ရုံ) ကို ယူသွားနိုင်မလား။
၇၂။ ဂရိတ်ဗြိတိန်၊ ယူကေ၊ ဗြိတိသျှကျွန်းစုများနှင့် အင်္ဂလန် (Great) Britain, the United Kingdom, the British Isles and England
ဗြိတိန် (ဂရိတ်ဗြိတိန်) နှင့် ယူကေသည် အင်္ဂလန်ပြည်၊ စကော့တလန်ပြည်၊ ဝေးလ်စ်ပြည်နှင့် မြောက်အိုင်ယာလန်ပြည်တို့ ပေါင်းစုထားသည့် ပြည်ထောင်စုဖြစ်သည်။ ၄င်း၏တရားဝင်အမည်အပြည့်အစုံမှာ The United Kingdom of Great Britain and Nothern Ireland ဖြစ်သည်။
ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း the United Kingdom (the ပါသည်ကိုသတိပြုပါ) = အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေလ နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်သည်။
ဂရိတ်ဗြိတိန် Great Britain = အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေလ (မြောက်အိုင်ယာလန် မပါဘဲ) ရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။
The British isles ဗြိတိသျှကျွန်းစု သည် အင်္ဂလန်၊ စကော့တလန်၊ ဝေလ၊ တောင်/မြောက် အိုင်ယာလန်အပြင် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိကျွန်းအစုအဝေးကိုရည်ညွှန်းသည်။
(မှတ်ရန်။ အင်္ဂလန်သည် ဗြိတိန်ပြည်ထောင်စု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်။ စကော့နှင့်ဝေလ ပြည်နယ်သားများသည် သူတို့အား အင်္ဂလိပ်လူမျိုးဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းအားနှစ်ခြိုက်လေ့မရှိပါ။ သူတို့အား British ဟုသာခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲသင့်သည်။)
၄င်းသည် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ကရင် တိုင်းရင်းသားများအား ဗမာဟု သိမ်းကြုံးခေါ်ဝေါ်၍မရသလိုပင်ဖြစ်သည်။ ထိခိုက်ရှလွယ်သော အသုံးအနှုန်းများဖြစ်သဖြင့် သတိထားသုံးစွဲသင့်သည်။
လူနားမလည်တဲ့ စကားလုံးတွေ မသုံးတော့ဘူး (No more gobbledygook by Guy ...
Permalink Reply by thinkhaingsoe on October 4, 2014 at 17:28
Permalink Reply by Su win myat on October 5, 2014 at 20:29
It is good for studying.